"काका" अब सामाजिक सञ्जालमा सेयरकाबारे नबोल्ने, के हो कारण ? - Arthasansar
बुधबार, ०६ साउन २०७८, १३ : ३७ मा प्रकाशित
सेयर बजारमा काका उपनामले परिचित केशब कोईराला लामो समय देखि सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुँदै आएका थिए । लामो समय देखि सामाजिक सञ्जालहरु मार्फत लगानीकर्ताहरुलाई विभिन्न सेयर बजार सम्बन्धी जानकारीहरु दिँदै आईरहेका थिए ।
लामोसमय देखि सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय काका अर्थात केशब कोइरालाले सामाजिक सञ्जालहरु मार्फत सञ्चालन गर्दै आइरहेको जानकारी मूलक गतिविधी स्थगित गर्ने भएकाछन् । आज उनले आफ्नो फेसबुक पेज काकासंग सेयरका कुरा मार्फत यस्तो जाकारी दिएका हुन् ।
काकाको सामाजिक सञ्जालको गतिविधिलाई कतिपय लगानीकर्ताहरुले सहि काम भन्दै समर्थन गरिरहेका थिए भने कतिपय लगानीकर्ताहरुले भने काकाको उक्त गतिविधीको विरोध समेत गर्दै आइरहेका थिए । सामाजिक सञ्जालहरु मार्फत सेयर बजारका विभिन्न चलखेलहरुको चर्को विरोध गर्दै आइरहेका काकाले नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत सेयरबजारको चलखेलमा संलग्न भएको कतिपयले आरोप लगाउने गरेका थिए ।
काका आँफु बिगत केही बर्ष देखि नयाँ तथा साना लगानीकर्तालाइ कमजोर र कर्नरिङ गरिएका कम्पनीहरु बाट जोगाउदै न्यून मुल्याङ्कित कम्पनीमा लगानी गर्न सामाजिक सन्जाल मार्फत सुझाव र सल्लाह दिदै आएको छु। यस बिचमा फसाउन खोज्नेहरु को फेक आइडि बाट गाली र नयाँ र आम लगानी कर्ताहरुको तालीको सामना गर्दै आएको बताउछन् उनि ।
बुलिस बजारमा नयाँ लगानी कर्ताको पहिलो रोजाइ नै मैले बिरोध गर्ने पत्रु कम्पनीहरु नै परेको भन्दै उनले हिले आएर मैले जसको हितमा आवाज उठाउदै थिए उनै लगानीकर्ताहरु हरु म प्रति जाइ लाग्न थालेकोले मेरो सचेतना अनावश्यक भएको निस्कर्षमा म पुगेको बताएका छन् ।
अतः सामाजिक सन्जाल मार्फत सचेतना जगाउने अभियान यहि स्थगित गर्दछु। ९० प्रतिशत नयाँ लगानीकर्ता लगानी डुबाउन नै बजार छिर्ने हुन,तिनलाई मैले रोकेर रोकिन्नन काइरालाले भनेकाछन् ।
केशब कोईराला काकाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटस यस्तो छः
अभियान स्थगित गरेको जानकारी !!
-बिगत केही बर्ष देखि नयाँ तथा साना लगानीकर्तालाइ कमजोर र कर्नरिङ गरिएका कम्पनीहरु बाट जोगाउदै न्यून मुल्याङ्कित कम्पनीमा लगानी गर्न सामाजिक सन्जाल मार्फत सुझाव र सल्लाह दिदै आएको छु।
- यस बिचमा फसाउन खोज्नेहरु को फेक आइडि बाट गाली र नयाँ र आम लगानी कर्ताहरुको तालीको सामना गर्दै आएको छु।
- बुलिस बजारमा नयाँ लगानी कर्ताको पहिलो रोजाइ नै मैले बिरोध गर्ने पत्रु कम्पनीहरु नै रहेको मैले पाए।
- हाल आएर मैले जसको हितमा आवाज उठाउदै थिए उनै लगानीकर्ताहरु हरु म प्रति जाइ लाग्न थालेकोले मेरो सचेतना अनावश्यक भएको निस्कर्षमा म पुगे ।
- अत: सामाजिक सन्जाल मार्फत सचेतना जगाउने अभियान यहि स्थगित गर्दछु।
९०% नयाँ लगानीकर्ता लगानी डुबाउन नै बजार छिर्ने हुन,तिनलाई मैले रोकेर रोकिन्नन ।